Article : ब्रेन ड्रेन होइन, बरू ब्रेन गेन
Source: NRNA ICC4years ago
नेपालबाट विभिन्न उद्देश्यले विदेशिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। त्यसै कारण सन् २००३ मा केही अग्रजको पहलमा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली सञ्जाल आज ७० देशमा विस्तार हुन सकेको हो। काम, शिक्षा वा अवसरको खोजीमा विदेशिने संख्या बढ्दै जाँदा 'ब्रेन ड्रेन' या प्रतिभा पलायनको जोखिमसमेत उत्पन्न भएको छ। तर, कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। छिमेकी भारतमा करबि ३० वर्षपहिले विदेशिने युवाको संख्या बढ्दै जाँदा ब्रेन ड्रेनको गुनासो धेरै सुनिन्थ्यो। तर, अहिले विदेशमा सफल भारतीय स्वदेश फर्किएका छन् र आफ्नो मातृभूमिको समृद्धिको अभियानमा साथ दिँदै छन्।
Bringing NRN to the Grassroots
Source: NRN - USA4years ago
एनआरएन एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको हङकङ भेला उपलव्धीपूर्ण हुनेछ
Source: NRNA5years ago
डा. कुमार बस्नेतको जन्म काठमाडौंको थानकोट (वाड भञ्ज्याङ) सन् १९७४ मे ५ मा भएको हो । उहाँले सिद्धार्थ वनस्थलीबाट विद्यालयस्तरीय शिक्षा र जापानस्थित सोफिया विश्वविद्यालयबाट इलेक्टि्रकल इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङमा स्नातक, स्नातकोत्तर र पीएचडी गर्नुभएको छ । विद्यार्थी जीवनदेखि नै सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुँदै आउनुभएका डा. बस्नेतले जापानमा मात्र नभई विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न संघ/संस्थाहरुको नेतृत्वदायी तहमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ ।
सान फ्रान्सिस्को बे यरिया
Source: NRN - USA6years ago
एउटा असल सन्देश सबैलाई पुर्‍याउन सफल भएका छौं - नेपाल जापान डट् कम को एनआरएन केन्द्रीय सदस्य रुद्र शर्मासंगको कुराकानी
Source: NRNA 1 decade ago
आगामी अक्टोबरमा काठमाडौंमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को तेस्रो विश्व सम्मेलन हुन गईरहेको छ । त्यस्तै नयाँ नेपाल निर्माणका लागि अगामि मंसिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीहरुको सहभागिताको बारेमा छलफल र बहसपनि जारी छ । त्यस्तै एनआरएन दक्षिण कोरियाको प्रथम साधारणसभा नोभेम्वरको अन्तमा हुन गईरहेको छ । यिनै विभिन्न बिषयहरुको सेरोफेरोमा रहेर दक्षिण कोरियामा रहेका एनआरएन आइसीसी सदस्य रुद्र शर्मासँग कुराकानी भएको थियो । शर्मा सम्मेलन आयोजना तयारीकै सिलसिलामा काठमाडौंमा रहेको मौकामा नेपाल जापान डट कमका लागि काठमाडौं संवाददाता सुभक महतोले गरेको कुराकानीको अंशः - एनआरएनको तेस्रो सम्मेलनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ? गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को तेस्रो सम्मेलनको तयारी गैरआवासीय नेपालीहरु र नव नेपाल निर्माण गर्ने प्रकृयामा केन्दि्त रहेर तयारी भईरहेको छ । देशमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन आएको र संविधानसभाको मुखमा सम्मेलन भइरहेको हुनाले यसलाई ध्यानमा राखेर तयारी गरिरहेका हौं ।
राहत संकलन र प्रवासी नेपालीहरु - खेमनाथ पौडेल (श्रोत: freenepal.com)
विभिन्न टीभी च्यानलहरुमा देखिएका नेपालका दृश्यहरुले अवश्य पनि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुको हृदय रोएको होला र ती पीडित नेपालीहरुको आवाजले पक्कै पनि प्रवासी नेपालीहरुको मनलाई छोएको होला । यदि साँच्चै नै नेपाल आमाको माया छ र सहयोगको भावना छ भने सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरुले सक्दो सहयोग जुटाऔं र तत्काल आइपरेको आपत्तिलाई केही मात्रामा भए पनि राहत पुर्‍याऔं । सायद हामी प्रवासी नेपालीहरुकै पनि कतिको घरखेत डुवानमा परेको छ होला ।
एनआरएनलाई राम्रोसंग अघि बढाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ - देवमान हिराचन (श्रोत: freenepal,com, कुराकानी
देवमान हिराचन/ संयोजक, एनआरएन तेस्रो विश्व सम्मेलन आयोजक समिति अगष्ट, २ काठमाडौं देवमान हिराचन गैरआवासीय नेपाली संघ तेस्रो विश्व सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक हुनुहुन्छ । जापानमा रहेर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको उपाध्यक्षको नेतृत्वसमेत सम्हाली रहनु भएका हिराचनसँग हामीले सम्मेलनको तयारीका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका थियौ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीका केही अंशः सम्पादक
6 months ago,NRNA गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) 'कोभिड- १९' तथ्यांकः अपडेट १३
6 months ago,NRNA एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको ९ औ वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन जारि